Warshadaha Shiinaha Pouf P021 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qalabka Dcl
Shayga No: P021
Waxyaabaha: Pouf, daboolka dharka, gunta birta oo birta lagu daray oo leh chrome dahab ah
Cabirrada: φ410 * 450mm
Cabbirka xirmada: 43cm x 43 cm x 47cm
Miisaanka saafiga ah: 4.2kg / pc
Miisaan culus: 5.5 kg / ctn
Dekadda Loading: Tianjin, Qingdao, deked kasta oo ku taal Shiinaha Mainland.
Miisaanka Shayga 4.2kg
Qiyaasta Soosaarka φ410 * 450mm
Dhisme Dherer 47cm
Ballaadhan oo la soo ururiyay 43cm
Dhererka La Isku Soo Daray 43cm
Tuubadu waxay kordhisaa quruxdeeda waxayna ka dhigeysaa dharka mid deggan, oo umuuqda mid nadiif ah oo hagaagsan.
Goobaabka dahabiga ah ee hoose wuxuu u muuqdaa mid raaxo leh.
Qolka fadhiga iyo Qolka jiifka ee Wareega leh ee Ottoman Lagu Arkay Muuqaalo Cusul leh oo buuxa oo lagu keydiyo Dheemanka Dheemanka ah ee Farsamada Gacanta Dhegeysan leh oo leh Salka Dib udhaca.
Dharka ottoman ee casriga ah wuxuu ka samaysan yahay agab tayo sare leh oo ay leeyihiin xirfadlayaal xirfad leh. Qaabka adag ayaa lagu daboolay velvet jilicsan oo leh badhamada dheeman, oo guriga u keenaya raaxo dheeri ah. Qaybtaan waxaa loo isticmaali karaa sidii saxarada cagaha, fadhiga madhan, ama saxarada fadhiga.
Khadka wax soo saarka iyo xakamaynta tayada
Waan aqbalnaa amar yar, waxaan sidoo kale ku bixin karnaa waxyaabo kala duwan oo salka ku haya baahidaada, si aad u cusbooneysiiso / hoos ugu dhigto waxyaabaha poufka ah isla markaana aad u dhigto baahidaada qiimaha; ama waad beddeli kartaa kala sooc midab oo waxaad ku yeelan kartaa qaaskaaga suuqa.
Waxaan haynaa koox QC xirfadleyaal ah oo baari doonta badeecooyinka kahor umulidda. Haddii wax dhib ah ay ka jiraan, waxaan ku hagaajin karnaa waqti, si aan u hubinno inaad ku heli kartid badeecada horudhaca ah.
Waxaa jira 3 lakab oo sifiican loogu xirxiro. Bacda lafaha ah sida lakabka ugu horreeya; boorso dhogor ah sida lakabka kore.
Adeegga iibinta kadib
Sii wada tashi nololeed oo kusaabsan dhibaatada ayaa dhacay. Haddii ay jiraan wax dhibaato ah, fadlan waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto.
Hore: Saxarada S021, S013
Xiga: Saxarada S010